Nagu saabsan - Xinxiang oo bararta Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd.
capacitor caqli badan
Xinxiang barar Electronic Technology Co., Ltd.waxay ku taalaa giraanta koonfureed ee Xinxiang high tech Zone, oo ay ku hareeraysan yihiin kulliyado iyo jaamacado, cilmi baaris cilmiyeed iyo jawiga tacliimeed. Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay leedahay shaqaale 60 ah, kuwaas oo xirfadaha sayniska iyo farsamada ay ka badan yihiin 35%. Baaxadda ganacsigeedu wuxuu daboolayaa R & D iyo iibinta qalabka robotka caqliga badan, wax soo saarka korantada, aaladaha caqliga badan iyo mitirrada, dareemayaasha, mashiinnada beeraha iyo kaabayaasheeda; horumarinta alaabada korantada iyo softiweerka hawlgalka iyo adeegyada la talinta farsamada; iyo hawlgalinta ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta shisheeye.
Saldhigga R & D wuxuu daboolayaa Beijing, Shanghai, Nanjing, Shenzhen iyo Guangzhou, oo leh shabakad iib ah waddanka oo dhan. Shirkaddu waxay leedahay koox adeegga iibka oo tayo sare leh oo ka kooban dalka oo dhan, oo siisa adeeg dhammaystiran, taxaddar leh oo dhakhso leh macaamiisha wakhti kasta. Sanadihii la soo dhaafay, shirkaddayadu waxay isku diyaarineysaa inay dhisto koox cilmi-baaris iyo horumarineed oo heer sare ah. Sida horudhaca warshadaha korantada, oo ku tiirsan fikradda dhismaha ee isku dhafka maaraynta tamarta iyo tikniyoolajiyadda dijitaalka ah, waxaan dhisnay xal dhammaystiran oo loogu talagalay maaraynta tayada awoodda. Saddexda iskuxir ee maamulida falanqaynta baaritaanka waxay sameysmayaan wareeg xiran, oo bixinaya xalal xirfadeed iyo alaab loogu talagalay nidaamka tamarta iyo shirkadaha tamarta cuno Waxaan abuuri doonnaa jawi koronto oo nabdoon oo nadiif ah si loo ilaaliyo quwada cagaaran ee adduunka.
Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay leedahay shan taxane ah oo ah alaab xidigle ah, oo ay kujiraan kantaroole magdhow awood leh, qalab isku-dhafan iyo badalka thyristor, kaabayaasha caqliga badan iyo aaladda shabakadda, oo dhammaantood si madax-bannaan loo soo saaray ayna soo saartay shirkadeena, Shirkaddu waxay kaloo leedahay aqoon isweydaarsi casri ah, qalabka tijaabada ee horumarsan, qalabka tijaabada iswaafajinta elektromagnetic, SMT khadka tooska ah ee isku dhafan ee isku dhafan iyo mashiinka horumarinta qalabka wax ku oolka ah, iyo sidoo kale horumarinta caaryada iyo kooxda naqshadeynta, kuwaas oo si buuxda u damaanad qaadi kara kantaroolka madax-bannaan ee soo-saarka u dhigma ee alaabooyinka cusub, iyo waxqabadka tayada iyo qodobka amniga gebi ahaanba waa la xakameyn karaa meesha, sidaa darteed shirkadeena ayaa leh mid gaar ah Marka lagu daro lahaanshaha xuquuqaha soo dejinta iyo dhoofinta ee madaxa bannaan, noocyada wax soo saarka ayaa sidoo kale ka caawin kara macaamiisha dibedda inay gaaraan wax soo saarka OEM iyo ODM Sannadka 2020, shirkaddu sidoo kale waxay leedahay qaab istiraatiijiyadeed oo suuqa adduunka ah. Marka laga soo tago dhoofinta wax soo saarka Shiinaha ee adduunka, waxay sidoo kale dhistay hool carwo caalami ah lagu soo bandhigo. Iyada oo ku saleysan soo dejinta Shiinaha ee qaar ka mid ah badeecadaha shisheeye, waxay xaqiijin kartaa kor u qaadista ama hawlgalka iyo dayactirka alaabooyinka caalamiga ah ee kanaallada gudaha Dhammeystiran shaqada ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta.
Nala soo xiriir, waxaan awoodi doonnaa inaan si wadajir ah u wada shaqeyno si aan u abuurno wax dhalaalaya.
Cinwaanka:Qolka 1401, cutubka 1, dhismaha 3, No. 99, Giraanta dibedda ah ee Koonfurta, Aagga tiknoolajiyada sare, Xinxiang City, Gobolka Henan